माउसले Keyboard को काम गर्नुहोस्
यदि तपाईंको Keyboard ले Properly काम गरी रहेको छैन र तपाईंलाई हर हालतमा केही कुरा टाईप गर्नै छ भने यो trick काम लाग्न सक्छ । यो trick प्रयोग गर्नको लागि तपाईंको Keyboard ले मात्र OSK टाईप गर्न सके पुग्छ अरु टाईप गर्ने काम सबै तपाईंले आफ्नो माउसले गर्न सक्नु हुन्छ । कुनै कुनै बेला यो trick ले निकै काम दिन सक्छ ।
@ यसको लागि सबै भन्दा पहिला Start अनी Run मा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहा OSK टाईप गर्नुहोस् र ओके मा क्लिक गर्नुहोस् ।
@ अब तपाईंको स्क्रीनमा on Screen Keyboard देखा पर्नेछ
@ बस अब आफ्नो माउसले उक्त keyboard लाई प्रेस गरेर अक्षरहरु टाईप गर्नुहोस् ।
0 COMMENT (आफ्नो कमेन्ट दिन यहाँ क्लिक गर्नु होला)
१० अनौठा USB Flash Drive हरु
विश्व बजारमा हालै उपलब्ध बिभिन्न आकार र प्रकारका USB FlashDrive हरुमा एक चोटि हामी पनि नजर हालौ न हुन्न ?
१ USB Flash Drive + Bottle Opener
TrekStor को ($43.71) पर्ने यो USB Flash Drive मात्र FlashDrive नभई बोटल ओपनर पनि हो । आल्मुनिएमको Body भएको यो Flash Drive को स्टोर गर्ने क्षमता १ जिबी देखी लिएर १६ जिबी सम्ममा उपलब्ध छ ।
२ Hamburger USB Flash Drive
भोक लागेको छ ? त्यसो भए Hamburger USB Flash Drive किन्नुहोस् र १ जिबी सम्मको information खानुहोस् । यो फ्रेस प्रोडक्टको मुल्य ($19.99) पर्छ ।
३ USB Hidden Flash Drive Watch
बोन्ड जेम्स बोन्ड । जासुस बन्न चाहनु हुन्छ ? ४ जिबीको क्षमता भएको USB FlashDrive घडीको केस भित्र अट्ने सानो आकारको छ र तपाईंले यो drive अरु कसैले नदेख्ने गरी लुकाएर कतै पनि लान सक्नु हुन्छ । प्लस्टिक केस,stainless स्टिल मास्क भएको घडी सहित यसको मुल्य ($49.99) तोकिएको छ ।
४ World's Tiniest USB Flash Drive
विश्वकै सानो4mm ko पातलो pico FlashDrive ($24.99) मा बजारमा आएको छ र यो drive ८ जिबी क्षमताको छ ।
५ USB Flash Drive + Lighter
ईलोक्ट्रोनिक्स र आगो कहिले पनि साथी हुन सक्दैन , तिनिहरु एक आपसमा शत्रुको रुपमा चिनिन्छन तर ($50.00) पर्ने USB Flash Drive Lighter यसको अपवादको रुपमा बजारमा आएको छ । यो प्रोडक्ट लाई विश्व बजारमा निकै युनिक रुपमा हेरिएको छ । यो flashdrive ८ जिबी क्षमताको छ र Lighter लाई रिफिल गर्न मिल्छ । यसमा USB कनेक्टरलाई लाइटरको तल Slide गरेर निकाल्ने गरी बनाइएको छ ।
६ Football USB Flash Drive
6 ounces वजन र १ जिबी क्षमताको Ball आकारको यो Drive ($19.99) मा बजारमा निकालिएको छ ।
७ Pizza USB Flash Drive
खानेकुराको department मा पिज्जा आकारमा उपलब्ध यो drive ko मुल्य ($19.99) नै राखिएको छ ।
८ USB Flash Drive + Eraser
यदि कुनै अफिसमा USB Drive हरु लान मनाही छ र तपाईंलाई लुकाएर लानु परेको छ भने यो प्रोडक्ट काम लाग्नेछ । ($10.99) मुल्यको यो प्रोडक्ट Eraser को भित्र लुकाइएको छ ।
९ USB Flash Drive Wrist band
यो Drive लाई आफ्नो नाडीमा घडी जस्तै बाध्न सकिन्छ । moisture प्रुफ निकै आकर्षक ६ बिभिन्न कलरमा उपलब्ध यो प्रोडक्टको मुल्य ($13.99) पर्छ ।
१० Light Bulb USB Drive
बल्ब जस्तै देखिने यो Drive १ जिबी क्षमताको छ र मुल्य भने ($19.99) ।
CleanUp प्रोग्राम चलाऊने तरिका
तपाईंको कम्प्युटर ढिलो चलेको छ ? यदि तपाईंलाई त्यस्तो लागेको छ भने तपाईंको कम्प्युटरको HardDrive मा नचाहिने अथवा भनौ Useless फाइलहरुको थुप्रो लागेको हुन सक्छ र यसै कारणले पनि तपाईंको कम्प्युटर slow चलेको हुन सक्छ । तपाईंले कसरी यस्ता नचाहिने फाइलहरु पत्ता लगाउने र Delete गर्ने त ? कुनै यस्तै software को प्रयोग बिना यो एक किसिमले असम्भब नै छ । त्यसैले यहाँ यस्तै एउटा CleanUp भन्ने प्रोगाम बारे चर्चा गर्न लागेको छु । यो एउटा freeware प्रोग्राम हो र तपाईंले यो सफ्टवेर फ्री मा आफ्नो कम्प्युटरमा download गर्न सक्नु हुन्छ । यो एकदम powerful टूल्स भएको सफ्टवेर हो र तपाईंले यो सफ्टवेर चलाएर आफ्नो कम्प्युटरको त्यस्ता नचाहिने Useless फाइलहरु जस्तै : तपाईंको कम्प्युटरको browser's history, bookmarks, favorites, cookies लगायत तपाईंको privacy related locations मा भएको फाइलहरु सबै delete गरिदिन्छ । त्यसैले यो सफ्टवेरको प्रयोग गरेर तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरको privacy पनि जोगाउन सक्नु हुन्छ ।
यो सफ्टवेर डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ( Download CleanUp! )
यो software आफ्नो कम्प्युटरमा download गरिसके पछि यो प्रोग्राम चलाऊनुहोस् ।
अब सबभन्दा पहिला यसको Configure मिलाउँ ।
चित्रमा देखिएको जस्तो रातो घेरा भित्र भएको option मा क्लिक गर्नुहोस् ।
बाँया तिर भएको Bar लाई "Standard CleanUp!" सम्म लानुहोस् ।
तपाईंको कम्प्युटरमा धेरै किसिममा cookies हरु स्टोर भई बसेका हुन्छ जसले तपाईंको password, Logins हरुका password हरु save गरेका हुन्छन । यदि तपाईं यो हटोस भन्ने चाहनु हुन्न भने "Delete Cookies" भन्ने option मा uncheck गर्नुहोस् । र ok
त्यतिबेला एउटा popup message "CleanUp! is finished but it needs to logoff" display हुनेछ । Yes गर्नु भयो भने कम्प्युटर restart हुनेछ यदि पछि मात्र गर्न चाहनु हुन्छ भने No मा क्लिक गर्नुहोस् ।